Sina: Zo hitokona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2010 8:12 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, polski, বাংলা, Español, English
Hatramin'ny niandohan'ny taona 2010, toa nisy onjam-pitokonan'ny mpiasa izany nitranga tao Sina, niitatra hatrany amin'ireo filazam-baovao Tandrefana mahazatra, toy ny the Financial Times niaiky ny fipoirana endrika vaovaon-ny tolon'ny mpiasa. Vao haingana, nanao hetsika nitakiany ny zon-dry zareo amin'ny asa tany Rosia ireo mpiasa Sinoa.
Raha ny filàzan'ny RIA Novosti, tamin'ny 13-14 Septambra dia maherin'ny 150 ireo mpiasa Sinoa no nitokona noho ny asa vita nefa tsy nandraisan-karama tamin'ny nanangànana ny foto-drafitrasa ho an'ny Fihaonana an-tampony APEC 2012 ao Rosia.
Feng Shanzhi avy amin'ny Mil Forum dia nanamarika ny vaovao sady nanakiana ny governemanta Rosiana tamin'ny nandefasana polisy sy miaramila handràva ny fitokonana. Na izany aza, maro ireo fanehoan-kevitra tsy miombona amin'ny mpanoratra:
sunnyrain: Azonareo atao ny mitokona manohitra ny Antoko Kaominista Sinoa, tsy dia mifankaiza amin'izany i Vladimir Putin.
翅膀: Ny politika ara-diplaomatikan'ireo firenena kapitalista dia tsy misy resaka iraisam-pirenena izany. Ny maha-dodona an-dry zareo dia ny tombontsoa, tsy misy valaka amin'ny fomba fiainana sy fifandraisantsika isan'andro. Izany no antony ipetrahan'ny hoe miray tombontsoa fotsiny ny firenena samihafa fa tsy misy firahalahiana ao anatin'ny tontolo kapitalista. Tsy azo ihodivirana izany.
Tsy fantatr'izy ireo izay fifandraisana iraisam-pirenena àny, na hoe ho takany ny halehiben'io fomba fijery io. Matetika ry zareo ireny no nanozona mihitsy ny Filoha Mao tamin'ny nanampiany an'i Afrika tamin'izany fotoana, tsy fantany fa nahitantsika tombontsoa amin'izao fotoana izao ny nanampiana ireny tany mahantra ireny.
Ambonin'izany, ireo kapitalista dia hametraka bebe kokoa ny dian-tànan-dry zareo amin'ireny fitokonana ireny, ary hain-dry zareo tsara ny mampiasa ny tetika sy ny fihokoana miainga avy ao anatiny. Niray hina hatrany ny tontolon'ny kapitalista, fa ny fianakaviamben'ny mpiasa no tsy mety mifoha foana.
Na dia somary ideolojika loatra aza itsy fanehoan-kevitra etsy ambony, maro amin'ireo mpanohana ny zon'ny mpiasa no mino fa ny fepetra tsy lavorary iainan'ny mpiasa ao Sina dia vokatry ny fitrandrahana ataon'ireo vondron'orinasa goavambe maro rantsana maneran-tany. Ohatra, Qianhong, mpanentana sy mpanadihady malaza be, dia nanakiana ny fihevitry ny solontenan'ny Goldman Sachs China momba ny fitokonan'ny mpiasa:
Inona no mampiahiahy ny solontenan'ny mpanambola amin'izany? Ity dia resaka momba ny tombontsoan'ny vondron'orinasa maro rantsana amin'ny fampiasana amin'ny karama vary masaka. Mampitahotra ny hampiasa ny volany any amina firenena hafa ry zalahy toa an'i India, Vietnam, Indonezia ary Brezila mba hampakàrana ny taham-pamokarana sy hahazoana amboniampanga bebe kokoa.
Raha ny olona maranin-tsaina dia hahatakatra fa ny fikatsahana karama ambonimbony kokoa dia mitarika amin'ny famindràna toerana ny toeram-pamokarana hankany amin'ny sehatra ahafahana maka ny tombom-barotra avy ao anatin'ny masonkarena. Na izany aza, ny politika koa dia hanaitaitra ny fanjifàna angovo ataon'ny sarangan'ny mpiasa sy hampiroborobo ny tsenan'ny fanjifàna anatiny…
Tsy misy valaka amin'ireo avara-pianarana maro sy mafana fo miaro ny zon'ny mpiasa, Qianhong dia niantso fanavaozana ny lalampanorenana mba hiarovana ny zo hahazo mitokona:
Raha afaka misafidy ireo mpiasa Sinoa, na “famonoan- tena” na “fitokonana” mba hiarovana ny zon-dry zareo, miangavy, meteza ho olona manana moraly ka avelao ry zareo ho afaka misitraka ny zony hitokona, miangavy mba hamelana azy ireo hiaina am-panajàna!
Ny teny filamatra “mivoatra miaraka amin'ny fotoana” dia nampiasaina foana nandritry ny 20 taona tao Sina. Ny politikan'ny varavarana misokatra dia mananika ny faha 30 taonany (1982-2012) ary ny Kaongresim-Pirenena faha-18 ho an'ny CCP dia hatao amin'ny 2012. Ny zo sy fahalalahana hitokona dia tsy tokony hiala ao anatin'ny lalampanorenan'ny Repoblika Entim-Bahoakan'i Sina. Fotoana izao tokony hanovan'i Sina ny lalampanorenany.
Taorian'ny Fitokonana tao amin'ny orinasa Honda tany ampiandohan'ny volana Jona, olona maro no velom-panantenana fa atsy ho atsy dia hanjary ho làlana iray tsara hahafahan'ireo mpiasa Sinoa manatsara ny fepetran'ny asan-dry zareo ny fanaovana fitokonana. Nanamarika i Lin Da Min fa ireo fampahalalam-baovao mahazatra dia efa manomboka mampiasa ny teny hoe “Fitokonana” (罢工) any anatin'ny tatitr'izy ireny:
Noho ny antony maro samihafa, ny teny hoe “fitokonana” dia mazàna no nampiasaina tany anatin'ireny antontan-taratasy rakitry ny tantara sy ny ara-pitsarana ireny. Raha ny zava-misy, na dia misy aza ireo mpiasa mitolona mitaky ny zony sy ny tombontsoany, toy ny fitokonan'ireo mpamily fiarabe, dia somary ahodinkodina ihany ny filàza azy, toy ny hoe “nàka tolakandro iray mba hiarahana misotro ranom-boafotsy ry zareo” na “mandà tsy hamily”. Raha ny marina, ny mpampahalala vaovao no voalohany nampiasa ny hoe “manao rodobe mankeny ankianja filalaovana”, “niato tsy nihodina ny ozinina” mba hamaritana ny fitokonan'ny mpiasa tao amin'ny Honda. Taorian'ny toa fisalasalana kely sy tsy ankiteniteny betsaka, nanomboka nampiasa ny hoe “fitokonana” ry zareo tamin'ireo lohateny lehibe an-gazety. Efa mariky ny firosoana izany.
Na izany aza, toa lasa aloha loatra ny tsirim-panantenana toy izany. Ny teny hoe “fitokonana” dia mitondra mankamin'ny resaka ara-politika. Voasivana io ary tatavanin'ny ankabeazan'ireo lohamilina fikarohana. Ity ambany ity dia dikasari-na fàfana iray maneho valim-pikarohana ny teny hoe “fitokonana” (罢工) tao amin'ny Baidu Tieba (resadresaka iray mandeha ho azy). Milaza ilay fanamarihana fa: “Miala tsiny aho, araka ny fandrindràna sy ny lalàna misy, tsy azo sokafana ity resadresaka ity”. Fanamarihana tsy misy valaka amin'izany no mipoitra amin'ny vavahadin'ny ankamaroan'ireo tranonkala.